नेपालमा रहेका भारतीय पनि फर्किदैं, सीमा क्षेत्रमा बढ्यो भीड
ब्लग बुधबार, चैत १२, २०७६
उवेला हैजा, झाडापखाला खूब लाग्थ्यो । त्यस्तो वेला बाहिरको खान बन्द गरिन्थ्यो । डाक्टरहरू थुप्रै थिए, कोही नेपाली, कोही इन्डियन । केशवबाबु इन्डियन थिए भने जीतसिंह र सिद्धिमणि चाहिं नेपाली । सिद्धिमणि एकदम असल, उनले गरेको औषधिले रोग कम भइहाल्थ्यो ।
बुवा र मुवालाई हेर्ने डाक्टरहरू बग्गीमा आउँथे । मुवाको स्वास्थ्य त्यत्ति राम्रो थिएन । वर्षेनि बच्चा पाउँदा जीउ कमजोर थियो । मोटो पनि होइसिन्थ्यो । वैद्यहरू पनि आउँथे, बडामुवाको बाथको उपचारका लागि।
इन्जेक्शन दिनुपर्‍यो, दाँत निकाल्नुपर्‍यो भने कम्पाउण्डर आउँथे । त्यो वेला वैद्यको औषधिबाहेक अरू सबै इन्डियाबाट आउँथ्यो ।
बच्चा जन्माउने बेला घरमै डाक्टरनी, सुँडिनीहरू आउँथे । मैले छोरा पाउँदा पनि एउटी काली–काली डाक्टरनी आएकी थिइन् । साथमा सुँडिनी पनि थिए, त्यसैले सजिलो भयो । बच्चा जन्माउन घरै जानु परेकोथ्यो, डिल्लीबजार । न्वारान गरेर माइत ढोकाटोल फर्केकी थिएँ ।
राणाजीहरूले त झन् आफ्नो दूध नै नखुवाउने । सुत्केरीहरूले दरबारमा ‘एप्लाइ’ गर्थे । अनि डाक्टर आएर उनीहरूको दूध निचोर्न लगाई पानीमा हालेर ‘टेस्ट’ गर्थे । डाक्टरले नै दूध असल, ‘ए–क्लास’ को छ भनेपछि ती धाईहरू दरबारमै बस्थे । उनीहरूको बच्चा चाहिं बाहिर आफ्नै घरमा राख्नुपर्थ्याे। ती बच्चालाई दूध ख्वाउन पैसा दिन्थे ।
ढोकाटोलमा हाम्रो बारी ठूलो थियो, हरियोपरियो खासै किन्नु पर्दैनथ्यो । पछाडि ‘ठूलोबारी’ मा सबै तरकारी हुन्थ्यो, ज्यापूहरूले हुर्काउँथे । फलफूलका बोट पनि टन्न थिए । नासपाती, अम्बा, आरुबखडा, हलुवाबेत थियो ।
हामी बच्चाहरू फलफूल चोरेर खूब खान्थ्यौं । राखेको ठाउँबाट पनि, रूखमा चढेर पनि । मेरो फुपूको नातिनी, नानीमैयाँ आएको वेला बोटबाटै चोथ्र्यौं । आफूबुवा र हाम्रो बारी बीचमा पर्खाल थियो । त्यहाँ हाम्रोभन्दा धेरै फलफूल थिए । पर्खालमाथिको फलफूल चोर्न रूख चढ्थ्यौं । दुई–तीन चोटि त लडें पनि । घुँडातिर घाउ लाग्थ्यो । राम्ररी नहेरेको भनेर धाईले गाली पाउँथे । अनि मेरो धाईले नानीमैयाँलाई गाली गर्थिन्, “यो काँठी आयो कि मेरो नानीलाई बिगार्छ”, भन्थिन् ।
मुवाहरू राणाजीको दरबार जाने बेलामा दिदी र म पालैपिलो जान्थ्यौं । दरबार कत्रो ठूलो ! कोठा त कत्ति कत्ति ! चोक नै कत्रो हुन्थ्यो ! उनीहरूले हामीलाई खेलौना, घाँगर, लुगा र पैसा दिन्थे । सबैभन्दा त मीठो पिपी दिन्थे । खाना धुमधामको हुन्थ्यो । गुरुमाहरूलाई भनेर लसुन प्याज नहालेको चोखो खाना पकाइएको हुन्थ्यो । कति थरी परिकार ! मिठाई पनि अचम्म अचम्म किसिमका । मीठो कति हुने, बयान गरेर साध्य छैन !
भुईंमा चट्ट कपडा बिछ्याइएको हुन्थ्यो । अनि त्यसमाथि चाँदीको भाँडामा गुरुमाहरूको ज्युनार ल्याउँथे । महारानीहरू चाहिं त्यत्ति आउँदा पनि उलिनकाठ चढेर आउनुपर्ने ! गज्जब थियो ।
विहीबार, जेठ २२, २०७७ नेपालमा रहेका भारतीय पनि फर्किदैं, सीमा क्षेत्रमा बढ्यो भीड